Uyifomatha njani ileta yeShishini
Ubhala uninzi lweeleta zeshishini ngenjongo yokwenza ukuba umfundi aphendule. Bhala iileta zakho zeshishini ngenjongo ecacileyo, uzenze ezo leta zingenazimpazamo, zinobuhlobo kwaye kufanelekile. Yonke imbalelwano yeshishini kufuneka ibhalwe kwileta yenkampani, kwaye ifom eseleyo yeleta yeshishini ibekwe emgangathweni. Zonke iileta zeshishini zinezinto ezilandelayo:
Indawo yedatha: Imigca emithathu ukuya kwemithandathu phantsi kweletahedi, gungxula ngasekhohlo okanye ngasekunene. Uluhlu lwedatha luqulathe inyanga (ichazwe ngokupheleleyo), usuku nonyaka.
Idilesi yomamkeli: Imigca emithathu ukuya kwemithandathu ngaphantsi kwedatha, gungxula ngasekhohlo. Idilesi yomamkeli yenziwe:
amoxicillin yedosi yosulelo yesifo
Isihloko esifanelekileyo seAddressee kunye negama elipheleleyo
Isihloko seshishini seAddressee
Isixeko, ilizwe, kunye nekhowudi ye-zip
Ukubulisa okanye ukubulisa: Umgca omnye okanye emibini engezantsi komgca wokugqibela wedilesi yomamkeli.
ndingayithatha i-melatonin emva kogonyo lwe-covid
Ukuba usebenzisa amagama okuqala kumntu, ungenza njalo kwisibuliso sakho.
Umzimba: Iqala umgca omnye ngezantsi kombuliso. Umzimba weleta uqulethe nantoni na oyithethayo.
Ukuvalwa kokuncoma: Imigca emibini engezantsi komgca wokugqibela womzimba wonobumba, egungxula ngasekhohlo okanye embindini.
Konke oku kuvalwa kulandelayo kufanelekile kwiileta zeshishini xa ungazi isihlomelo: Okwakho ngokwenene, Okwakho ngokwenene, Okwakho kakhulu, Ozithobileyo, Ozithobileyo, Onyanisekileyo.
Umsayino: Ngokukhawuleza ngezantsi kokuvalwa kokuncomekayo, bhala ngesandla utyikityo lwakho.
Ngaba gabapentin ikunceda ulale
Kwangoko ngezantsi kwesiginitsha yakho ebhalwe ngesandla, chwetheza utyikityo kunye nesihloko seshishini.
advil kunye neTylenol kunye
Izaziso zokugqibela: Imigca emibini engezantsi kwesiginitsha yakho echwetheziweyo. Umzekelo, ukuba uthumela iikopi zeleta kwabanye abantu, unokuchwetheza I-DC :, kulandelwe ngamagama adweliswe ngokwe-alfabhethi abo bafumana le leta.
Jonga umzekelo weleta efanelekileyo yeshishini kulo mzobo.
Cofa apha ukuze ujonge ngakumbi.
bavavanya ziphi iziyobisi abaqeshi
Iipilisi ezimhlophe ezijikelezileyo ezingama-54
I-microgestin 1 20 fe tabs 28s
iziphumo ebezingalindelekanga ze-estradiol